विचार/दृष्टिकोणमा रहेका समाचारहरु
गाई मार्नुमा को दोषी!
प्रकाशमान सिंह । देशको राष्ट्रिय जनावरको जुन किसिमले बरबरतापुर्ण हत्या गरियो, त्यो शब्दमा बयान गर्न गाह्रो छ।राज्यका ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दु जनसंख्याले धार्मिक आस्थाका रुपमा माताको उपमा हेर्ने गरेको पशुमाथी गरिएको क्रुर र अमानवीय व्यवहारप्रति घोर भर्त्सना गर्न जरुरी नै छ। गएको हप्ता बाकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट दैलेख तर्फ लैजादै गरिएका २९१ गाई मध्य ३५ गाईलाई भिरबाट खसालेर मारिएको घटनाले यतिबेला सर्बत्र बहस र चासोको बिषय बनिरहेको छ।सोही घटनाका सन्दिग्दहरुलाई...
स्थानीय तहमा नियुक्ति : जनप्रतिनिधिको भुमिका
बसन्त शर्मा। देशमा लामो समय पछि स्थानीय तह अस्तित्वमा आएको भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा सिंहदरवार गाऊँ-गाऊँमा आएको अनुभुति नागरिक तहमा हुन भने सकिनकि रहेको छैन् । नतिजामुखी प्रशासन,समृद्धि र सुशासन भन्ने सरकारको नारा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । विकास निर्माणका कामहरु जन प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा भन्दा अहिले धेरै प्रगतिमा छन् । तर विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने प्रसस्तै ठाउँहरु छन् । कतिपय काममा प्रक्रियामा नै प्रश्न...
बिबेकशिल नेपाली दल रोल्पामै किन!
निरज शाह ।बिबेकशिल नेपाली दल को नीति तथा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो खण्डको नीति सम्मेलन असार १३,१४ र १५ मा रोल्पाको लिबाङ मा हुने भएको छ। साझा संगको एकिकरण प्रक्रिया भंग गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेको विवेकशील नेपाली दल ले आफ्नो राजनैतिक दस्तावेज, विधान र विभिन्न रणनितिहरुको छलफलको लागी रोल्पाको लिबाङलाई रोजेको हो। सम्मेलनमा सातवटा प्रदेश र ‘प्रवास’बाट सदस्यहरु सहभागी हुनेछन्। भेलामा संघीय गणतन्त्र सापेक्ष दलको...
आक्रमणकारीबाट यसरी परियो चार घण्टा बन्धकमा
गजेन्द्र गुरुङ ।शुक्रबारको दिन बिहान ७ बजेतिर नेपालगन्जको बिपि चोकमा चिया पिईरहेको थिए । नेकपा बाँकेका जिल्ला सदस्य तथा सभासद कृष्णा केसीका निजी सचिब भाइ सुर्य घर्तिमगरको फोन आयो । ‘दाइ अहिले नै राप्तिपारी जानू पर्ने भो, कृष्णा दिदीको निर्बाचन क्षेत्रका मतदाता सङ्गको भेटघाट र अबलोकन गर्ने कार्यक्रम छ, पत्रकार कृष्ण वली र अरु १/२ जनाको टिम छ ।’- उनले भने । मैले उनलाई हुन्छ भने अनि बिहान ७:३० बजे...
महिलाबेचविखन तथा तस्करी विरुद्ध सरकार किन मुखदर्शक ?
कमला हमाल । गएको साउनमा दिल्ली महिला आयोगको टोलीले मध्यरातमा १६ नेपाली महिलाको ‘उद्दार’ गर्यो । मानव तस्करले कुवेत र इराक पठाउन लगेका ती महिलालाई दिल्लीको मुनिर्का क्षेत्रको एउटा सानो कोठामा करिव ८ महिनादेखी बन्धक बनाइ राखीएको अवस्थामा ‘उद्दार’गर्यो । दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्ष स्वाती मालिवाल दिल्ली प्रहरीलाई लिएर उनी राति साढे १ बजे महिलाहरु बसेको घरमा छापा मारिएको मालिवालले ट्वीटरमार्फत् जानकारी दिइन् । वैदेशिक रोजगारीको आश देखाएर दलालले ती...
राज्य कब्जाको क्रमिक अभ्यासमा कम्युनिस्ट सरकार
देवेश झा । नेपालको संविधान धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ घोषित गरिएको छ । झट्ट हेर्दा सहज लाग्ने उक्त पदावलीमा गम्भीर तात्पर्य लुकाइएको सहजै बुझिँदैन । राजनीतिक रुपमा विश्वमा अहिले दुई प्रकारको व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । उदार अर्थतन्त्रमा आधारित संसदीय अभ्यास सहितको व्यवस्था र राज्यद्वारा संरक्षित अर्थतन्त्रमा आधारित जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था । पहिलो व्यवस्था मूलतः बेलायतद्वारा प्रतिपादित ‘वेस्ट मिनिस्टिरियल सिस्टम’को संशोधित स्वरुप हो भने दोश्रो...
डा.युवराज संग्रौला संविधान जारी हुनुपूर्वदेखि नै नेपालको राज्य प्रणाली र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई विवादास्पद बनाउने, तिनीहरूको साखलाई तेजोवध गर्ने र नागरिकका नजरमा राज्यका ती महत्त्वपूर्ण निकायप्रति अविश्वास पैदा गर्ने शृंखलाबद्ध कार्य भइआएका छन् । यस क्रममा संविधानसभा समेत अपवाद रहेको थिएन । त्यसको अहं मर्यादा र भूमिकालाई निस्तेज गर्ने प्रहारको कुनै सीमा रहेन । यसै क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियोजित आक्रमणको सिकार बन्यो । लगत्तै पछाडि सर्वोच्च अदालत निशानाको केन्द्र...
हजारौं राजा भन्दा एउटा राजा निको…..
२७ पुस। राजा राजा नै हुन्। देश निर्माण र नेपालको अस्तित्व बचाउनमा राजाको निकै ठूूलो महत्व छ । हाम्रो देशमा राजाहरु नभएको भए सायद यो देश कसैको उपनिबेष भइसक्थ्यो होला । यहाँ राजा भैइदिएको भए महँगी हुने थिएन होला । जनताहरु आजित हुन लागि सके, जनताहरु रोग, शोक र भोकमा छ्न् तर नेताहरु मोज, भोज र जलपानमा छ्न्। यही हो नेतातन्त्र। आज अपराधीहरुलाई नि सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था बनाएका छ्न् नेताले...
कूटनीतिमा पुर्खाकै अपमान
मधुरमण आचार्यसरकारको प्राथमिकता स्पष्ट भएन भने राज्य सञ्चालनमै समस्या उत्पन्न हुन्छ। प्राथमिकताका पनि निश्चित आधारहरू हुन्छन्। त्यही आधारमै सरकार अघि बढ्ने हो। तर, यतिबेला त्यस्तो आधार तय भएको देखिँदैन। तय गरिएका प्राथमिकता, काम गर्ने शैली र विश्व सम्बन्ध सबै पक्षबाट सरकार सचेत र चनाखो भएर अघि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालको कार्यशैलीका आधारमा जनताले उनीबाट धेरै आशा गरेका थिए। लामो समयसम्म अस्थिरतामा चित्त बुझाउन बाध्य जनताले यतिबेला...
इन्धन सकिएको बुलेट ट्रेन
विनोद सिजापति ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा घन्काउँदै सरकार गठन भएपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका आश्वासन भरिपूर्ण वक्तव्यहरूले समाजलाई उत्साहित तुल्याएको थियो। समुद्रमा नेपाली झन्डा फहराउ“दै पानीजहाज चलाउने, हाम्रा नदीनालामा जहाजबाटै समुद्रस“ग जोड्ने, उत्तर–दक्षिणका रेलहरू दौडने अनि हाम्रा चुला ग्याँसका पाइप लाइनबाट जोड्नेजस्ता आश्वासन बा“डिए। त्यसले सरकार ‘बुलेट ट्रेन’ को ‘स्पिड’ मा दगुर्ने भयो भन्ने विश्वास जनमानसमा परेको थियो। आमनागरिकलाई ‘अपार सम्भावना भएको देशमा’ समृद्धि हेर्दाहेर्दै आफ्नै आँगनमा आइपुग्ने...